Nyaya mbiri idzo dzevashambadziri vekutengesa dzinogara dzichirwira pamhepo kugona kudzikisa yavo saiti nguva yekutakura UYE kugona kukurumidza kuendesa mamwe ekumaka sarudzo pane avo ewebhu zvivakwa. Iyo yakajairika bhizinesi mubatanidzwa inogona kunge iine deployment hurongwa iyo inotora mavhiki kana kunyange mwedzi kuti uwane shanduko kune saiti.
Mumwe wevatengi vedu vebhizinesi akabatanidzwa BrightTag's Enterprise tag manejimendi pane yavo saiti ine zvinoshamisa mhedzisiro. Saiti yavo yaive ichimhanya yakawanda analytics zvinyorwa kuwedzera kune zvimwe zvishandiso. Nekuisa ese ma tag muBrightTag, yavo nguva yekuremerwa yakadzikiswa zvakanyanya - uye ivo vaigona kubata maturusi api akabatanidzwa uye sei zvakananga kubva kuBrightTag pasina kubhagiya yavo webhusaiti timu.
Heino vhidhiyo ipfupi kubva ku2013 CEC Merrick Momentum Awards.
BrightTag Tag Management inosunungura iwe kubva kune zvisingakwanisike zvematagi kuti iwe ushandise shoma nguva yekukanganisa kodhi uye yakawanda nguva kugadzira. Imwe tag inozviita zvese.
Enterprise Tag Management Zvimiro
Gadzira uye uvandudze ma tag mumasekondi. Sununguka kubva kune IT yekuvandudza kutenderera uye gadzirisa ma tag pane ako wega nguva. Kuyerera kwebasa kweBrightTag kunoita kuti iwe ubate nyore ma tag chero nguva uye zvisinei zvawakagadzirira. Pakarepo gadzira tag iyo iwe yaunogona kuongorora, kumisikidza uye kusaita, chero iwe paunoda.
Kurumidza kuita yako saiti pasina kurasikirwa data rakakosha. Patent Server-Yakanangana uye yakafanana tag kurodha kurongedza imwe-maviri punchi yekuita. BrightTag's Server-Direct inopfuudza dhata kune vamwe vako mune chaiyo-nguva, kuchekesa huwandu hwematagi pane yako saiti uye kumisa kurasikirwa kwedata mumakwara ayo. BrightTag zvakare zvine hungwaru kutakura tag kodhi pasina kuvharira zvemukati zvemukati kuti vashandisi vako vasabatike vakamirira mamaki anononoka.
Tora zvese zvevashandisi chiito uye data chinhu pane yako saiti uye ugozvigovana nemumwe wevamwe vako. Ongororo apo data riri kuunganidzwa uye ndiani ari kugamuchira data nekukosha kumwe chete.
Mitemo yebhizinesi inoita kuti iwe ugone kuona kuti riini uye sei ma tag moto, kudzora mushandirapamwe, enzanisa vatengesi musoro-ku-musoro, gadzira zvakanaka ako kushambadzira kuedza, uye nezvimwe. Sarudza kubva paseti yemirawo yakatarwa yekupfura kana gadzira yako wega nemitemo yedu ine mamiriro anovaka.
Yechokwadi-nguva tag yekutarisa uye kushuma. Wana nzwisiso yekukasira mune yega tag pane peji rega resaiti yako. Rakareruka dashibhodhi maonero anokupa iwe unoonda pane hutano hweako ma tag, nepo isu tichiona API inokutendera iwe kuisa manhamba akanangana nemidziyo yako.
Yekumhanya tag kukanganisa kukanganisa, data shoma rakarasika. Ziva uye gadzirisa dhata yemhando yepamusoro nekukasira-chaiko-nguva kukanganisa kukanganisa. Ichokwadi ndechekuti tag kodhi inomhanya kuburikidza nebrowser iri gumix ingangoita mhedzisiro. Yechokwadi-nguva kukanganisa kukanganisa kunokubatsira nekukurumidza kuti uone kusawirirana, kutora matanho uye kudzivirira kurasikirwa kwedata.
Partner Catalog. Nekumisikidza-uye-kuenda kusangana kwemazana evatambi vevakabatana, iwe unomuka uye unomhanya mumaminetsi. Intuitive yekutsvaga maturusi anokubatsira iwe nyore kuwana vako vatengesi vavakabatana nemazita kana kodhi, nepo yedu Smart Tsika Tag inokupa iwe kuchinjika kana iwe uchiida.
Gadzira zvakavanzika marongero iyo inobvumira vashandisi kusarudza kubuda. Nemitemo yepasirese yekuvanzika inogara ichichinja, iwe unoda chishandiso chinoshanduka chisingade kuti utore webhusaiti yako nguva dzese panoshanduka mutemo. Kudza sarudzo dzevatengi vako kutenderera kuunganidzwa kwedata uye tora ma tag mumutsara.
Hunyanzvi. Kana ma tag achinge anonyengera, BrightTag ine timu yekumaka nyanzvi avo vakazviona zvese uye vanokupa zviwanikwa zvaunoda.
Tags: wedzeraChiedzacoremetricsgoogle analyticskenshoom6domniturequantcastsaiti catalysttaggingTagsudzachijanazvideo